113 Rumbidzai Jah!* Murumbidzei, imi vashumiri vaJehovha,Rumbidzai zita raJehovha. 2 Zita raJehovha ngarirumbidzweKubva zvino zvichienda mberi uye nekusingaperi.+ 3 Kubvira pakubuda kwezuva kusvikira pakuvira kwaro,Zita raJehovha ngarirumbidzwe.+ 4 Jehovha ari pamusoro pemarudzi ese;+Kubwinya kwake kuri pamusoro pematenga.+ 5 Ndiani akaita saJehovha Mwari wedu,+Iye anogara* pakakwirira? 6 Anokotama kuti atarise denga nenyika,+ 7 Achisimudza munhu akaderera kubva muguruva. Anosimudza murombo kubva mumurwi wemadota*+ 8 Kuti aite kuti agare nevakuru vakuru,Nevakuru vakuru vevanhu vake. 9 Anopa mukadzi asingabereki mushaKuti ave amai vanofara vane vana.*+ Rumbidzai Jah!*
^ Kana kuti “anogara pachigaro cheumambo.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “munorasirwa marara.”